» मानब बेचबिखन तथा ओसारपसारको बदलिदो स्वरुप व्यापारिक बालयौन शोषण
मानब बेचबिखन तथा ओसारपसारको बदलिदो स्वरुप व्यापारिक बालयौन शोषण
अधिबक्ता जगन्नाथ सुवेदी
१६ भाद्र २०७६, सोमबार ०७:५९
समाज बिकाश को क्रमसंगै अपराधका दायरा र शैलिसमेत फेरिएका छन् । मानब बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराध अब बयस्क महिलालाइ वा पुरुषलाइ पनि देशको सिमा पारगराएर बेचबिखन गराउनपर्ने अबस्थामा अब थप तौर तरिकाहरु देखा परेका छन् ।
महिला बालबालिकााहरु बसोबास गरेका गाउँ सहरमानै आएर बिभिन्न बाहनाले प्रभाबमा पारि शोषणगर्ने गरेका घटनाहरु देखापरेका छन् । के नसोचौं भने नेपाल आगने सबै बिदेशी पर्यटकहरु नेपालका हिमाल, नदीनाला, हरियाली र याहाँका साँस्कृतिक बिबिधतामा रमाउन र अध्ययन गर्न आएका हुदैनन् । बालयौन शोषण गर्ने नियत भएका धरै पेडोफाइलहरु पनि आउने गरेका छन् ।
अंग्रजीमा पेडोफाइलको नेपाली अर्थ बाल यौन दूराचारी भनि भन्न सकिन्छ । यिनीहरु एक किसिमले बिकृत यौन मानसीकता भएका र त्यसै अनुरुपको सोच र अभ्यासमा रमाउनेहरु हुन्छन् । यिनिहरु कहिलेपनि बयस्क बिपरित लिंग प्रति यौन चाहनाको दृष्टिले आकर्सित हुदैनन् । बालबालिकाहरुमात्र यिनीहरुको आर्कषणको केन्द्रमा पर्दछन् । यिनीहरुबाट जहिले पनि बालबालिका अशुरक्षित नै हुन्छन् ।
यिनीहरुले बालबालिकाहरुलाइ अप्राकृतिक करणी बाट तथा जिस्किएर, छोएर र अन्य बिभिन्न तौरतरिकाले यौन आनन्दको अनुभब गर्दछन् । यसलाइ आधुनिक दासत्वको स्वरुपमा हेर्ने प्रचलन रहेको छ । कुन कुन स्वरुपमा यस्ता दासत्व बिद्यमान छन् र यस अपराध संग जोडिन आउने अन्य पक्षलाइ कसरी बुझ्ने भन्ने बिषयमा निम्नानुसार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
ब्यापारिक बाल यौन शोषणको परिभाषाको कुरागर्दा युनिसेफले भनेको छ कि बालबालिकालाई यौनजन्य कार्यमा संलग्न गराई त्यसवाट दोस्रो व्यक्तिले नाफा वा फाईदा लिन्छ भने त्यस्तो कार्य बालबालिका माथि हुने व्यावसायिक यौन शोषणको कार्य हो ।
यसैगरि बिष्व स्वाष्थ्य संगठनले गरेको परिभाषमा बालबालिकाको व्यावसायिक तथा अन्य शोषणको कार्य जसबाट दोस्रो व्यक्तिले फाईदा लिने गर्दछ र यस्तो कार्य बालश्रम र बाल वेश्यावृत्तिमा मात्र सिमित हुदैन यसले बालबालिकालाई शैक्षिक, मानसिक, नैतिक,र सामाजिक असर गर्ने गर्दछ । माथिका यी परिभाषाहरु हेर्दा, बालवालिका माथिको व्यावसायिक यौनशोषण अर्को व्यक्तिले आर्थिक वा अन्य किसिमका फाईदा लिनका लागि सञ्चालित भएका हुन्छन् ।
यसमा बालबालिकालाई यौन व्यावसायमा संलग्न गराइन्छ र अर्को व्यक्तिले आर्थिक वा अन्य फईदा प्राप्त गर्दछ । यस्तो कार्य बालशोषण र बाल वेश्यावृत्तिमा मात्र सिमित हुदैन यसले बालबालिकालाई शैक्षिक, मानसिक, नैतिक,र सामाजिक असर गर्ने गर्दछ । बालबालिकाको यौन शोषणको कार्य उनिहरुलाई वस्तु वा सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्नु हो । आधुनिक दासत्वको स्वरुपमा प्रयोगहुने केहि शब्दावलीहरु र तिनका अबधारणागत बुझाइलाइ निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ।
बाल यौन पर्यटन
कुनै एक देशका मानिस अर्को देशमा गई वा स्वदेशकै मानिसले पनि त्यहाँका बालबालिकालाई विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा पारी गरिने यौन शोषण बाल यौन पर्यटक योजनावद्ध रुपमा देश विदेशका बिभिन्न स्थानमा यौनप्यास मेटाउन जान्छन् र कहिले काँही बालबालिकालाई बिभिन्न प्रलोभन पारि उनिहरुको यौन शोषण गर्दछन् ।
बाल यौन शोषण गर्ने व्यक्तिहरु घुम्न, छुट्टी मनाउन अथवा अरु कुनै कारणवस त्यस्ता व्यक्तिहरु बालबालिकासँगै यौन क्रियाकलाप गर्ने उद्देश्य लिएर आएका हुन सक्छन् । उनीहरुको प्रमुख उद्देश्य भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सडक बालबालिकालाई विभिन्न प्रकारका प्रलोभनमा पारी नगद अथवा महङ्गा उपहारहरु दिने र विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लगी यौन शोषण गर्ने कार्यहरु गर्दछन् । यो कार्य नेपालका पर्यटकीय नगरी काठमाडौको ठमेल, पोखरा, धरान र चितवनको सौरहा समेतका स्थानहरुमा विस्तारै मौलाउँदै गएको छ ।
कुनैपनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वेश्यागमन गर्ने समेतको कामलाई मानव बेचविखन भनिन्छ । मानव बेचविखनमा बालबालिकालाई विशेषतः ललाई फकाई विभिन्न प्रलोभन दिई झुक्याई डर, धाक, धंकी दिइ, करकापमा पारेर,जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर वा विभिन्न वाहानामा अभिभावको स्वीकृति लिई वा नलिई दुवै तरिकाले बेचविखनमा पार्ने गरिएको छ । विशेषतः बेचविखनमा परेका बालबालिकाका सवै प्रकारको अधिकारहरुको हनन् हुने गई अन्ततः जिवन नै वर्वाद हुने अवस्था भएको हुँदा कानुनले यस्ता कार्यमा संलग्न हुने र सहयोग गर्ने सवैलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
बाल अश्लिल चित्रण
बालबालिकाको नङ्गन तस्विर खिची प्रर्दशन गर्ने, बालबालिकाको अश्लिल भीडियो बनाई प्रर्दशन गर्ने गराउने, बालबालिकालाई अश्लिल कार्यमा संलग्न गराई त्यसबाट विभिन्न इन्टरनेट सामग्रीहरु तयार गरि इन्टरनेटको प्रयोगबाट नै सार्वजनिक गर्ने कार्य बाल अश्लिल चित्रण हो ।बालबालिकाको अश्लिल चित्रण उत्पादन, प्रकाशन तथा आयात निर्यात जस्ता कार्यहरु बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ ।
हरेक राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रका घरेलु कानुनमा यस अपराधलाई गम्भीर अपराध मानि दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकाहरुको अश्लिल फोटो वा भिडियोको प्रयोग गरि यौनउत्तेजना बढाउने वा यौनदल आनन्द लिने कार्यहरु गर्दछन् र यस्ता कार्यहरु व्यवसायिक बाल यौन शोषणको कार्य भित्र पर्दछन् । बालबालिकाको नग्न तस्विर लिने, देखाउने, प्रकाशन तथा प्रशारण गरि त्यसबाट फाइदा उठाउने कार्यहरुलाई संसारभर अपराध मानिएको छ ।
बाल अश्लिल चित्रण करोडौ आम्दानी हुने व्यवसाय भएको हुनाले फोटोग्राफ, किताब, श्रब्यदृष्य लगायतका माध्यमबाट गरिने बालबालिकाको यौनजन्य क्रियाकलापलाई जनाउँदछ । यौन व्यवसायको प्रमुख द्वारकोरुपमा बाल अश्लिल चित्रण रहेको छ । शुरुमा उनीहरुलाई जबरजस्ती वा विभिन्न आर्थिक प्रलभोनमा पारेर यस्तो कार्यमा प्रयोग नै गरिन्छ र पछि बिस्तारै यौन व्यवसायि नै बनाउने गरिन्छ ।
बालबालिकाहरुलाई बिभिन्न खालका आर्थिक प्रलोभनमा पारेर वा डर, धाक, धंकी दिई करकापमा पारी उनीहरुलाई यौन जन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराई आर्थिक रुपमा नाफा कमाउने कार्यलाई बालवेश्यावृत्ति भनिन्छ । बालबालिकाको मन्जुरी लिई वा नलिई गरिने यौनजन्य कार्य नै बाल वेश्यावृत्ति हो ।
बाल वेश्यावृत्तिमा परेका बालबालिकाहरुलाई मानव बेचविखन ओसारपसारको स्वरुप अनुसारको कार्य गरि वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराइएको हुन्छ । यस्ता कार्यमा सम्लग्न बालबालिकाहरुलाई यौन संक्रमणका विभिन्न रोगहरुलाग्ने गर्दछन् । जसको कारणले गर्दा उनीहरु शारीरिक र मानसिक रुपमा बिक्षिप्त हुने हुँदा कानुनतः यो जघन्य अपराध हो ।
फुटपाथमा हुने यौन व्यवसाय
फुटपाथमा हुने यौनव्यवसाय वेश्यावृत्तीको एउटा स्वरुप हो । यो नेपालका प्रमुख सहरमा मौलाउदै गएको छ । भुकम्प पछि मानिसको शहरी क्षेत्रमा भएको बसाई सराईले गर्दा किशोरी÷बालिका अत्यन्त जोखिमा परेका र यस्ता किशोरी ÷ बालिकालाई नै पहिले फुटपाथबाट यौनव्यवसाय संलग्न गराईने गरिएको छ । सिविनले गरेको एक अध्ययनले सडक बालक समेत यौनशोषण हुने गरिएको पाईएको छ ।
बालयौन दुराचार भन्नाले बालबालिकाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी शारीरिक रुपमा बालबालिकाहरुको यौनाङ्ग स्पर्स गर्ने चलाउने, चुम्बन गर्ने वा शारिरीक स्पर्श गरेर मानसिक यौन तृप्ती लिने गर्दछन् । यस्ता वयष्कहरुले अमर्यादित अर्थात अश्लिल बोलि व्यवहार गर्ने, आफ्ना यौनाङ्गहरु देखाउने यौन क्रियाकलाप गरिएका चित्र तथा अन्य सामाग्री देखाउने हेर्न उस्काउने आफु उक्तेजित भएको आनन्द लिएको कुरा इच्छा राखेर बालबालिकालाई देखाउने सुम्सुमाउने मुसार्ने माया गर्ने समेतका कार्य गर्ने गर्दछन् ।
बालबालिकाहरुलाई झुक्याएर, प्रलोभन देखाएर र केही दवावमा पारेर यौन दुराचार गरिन्छ । बालयौन दुराचारीले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकाहरु र सडक बालबालिकालाई यस्तो अपराधीक कार्यको लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
बाल तथा जवरजस्ती बिवाह
बिबाहको बहाना गरेर यौन शोषणको दीगो परिवेश बनाउने परिपाटी समाजमा देखिएको छ । बिष वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीको बिवाहलाई हाम्रो कानुनले बालविवाह मानेको छ । केटा वा केटीको मन्जुरी विना गरिएको विवाह जवरजस्ती विवाह हो । यस्तो विवाह स्वत बदर हुन्छ र गराउने व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ । १८ वर्ष मुनीको किशोरीलाई उसको सहमति वा मन्जुरीले शारीरीक सम्पर्क राखेमा हाम्रो कानुन अनुसार सो कार्य जबरजस्ती करणीको अपराध हुनेछ ।
कस्ता बालबालिकाहरु बाल यौन शोषणको जोखिममा रहेका हुन्छन ?
कमजोर आर्थिक अवस्था, गरीवी, साथी संगत विभिन्न आर्थिक प्रलेभनमा परेका बालबालिका, दैवी प्रकोपका कारणबाट विभिन्न किसिमका जोखिममा परेका १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका सडक बालबालिकाहरु जबरजस्ती बेश्याबृत्तिको शोषणमा पर्दछन् ।
बालबालिकाहरुको व्यवसायिक यौन शोषण गर्ने व्यक्तिहरु को को हुन सक्दछन् ?
वर्तमान अवस्थामा ब्यबसायिक बाल यौन शोषणका माध्यमहरु के के हुन ?धेरै नाफा कमाउने व्यवसाय भएको हुनाले बालयौन शोषण गर्ने कार्यमा तस्करहरु, कानुनको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु, परिवारका सदस्यहरु, यौन पर्यटकहरु, राजनितिज्ञ, समाजसेवी र धार्मिक गुरुहरु आदिले पनि विभिन्न बहानामा यस्ता कार्यमा सम्लग्न हुने गरेको पाइएको छ । विशेष गरि विदेशी पर्यटकहरु समाज सेवा गर्ने बहानामा बाल यौनशोषण गर्नको निमित्त आउने गरेको नेपालमा विभिन्न घटनाहरुबाट उजागर भएको छ
वर्तमान अवस्थामा ब्यबसायिक बाल यौन शोषणका माध्यमहरु के के हुन ?
नेपालमा खास गरि मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु जस्तैः डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, दोहोरीसाँझ र मसाज पार्लरमा काम लगाउने बहानामा देशका बिभिन्न ठाउँबाट बिशेषगरि बालिकाहरुलाई उक्त क्षेत्रमा काममा लगाउनको लागि बिभिन्न खालका प्रलोभनमा पारि ल्याउने गरिन्छ ।
मनोरञ्जनको क्षेत्र ब्यबसायिक बालयौन शोषणको प्रमुख माध्यम भएको छ । गरिबि र प्राकृतिक बिपदका कारणले आर्थिक रुपमा अत्यन्तै जोखिममा परेका बालबालिकाहरुलाई बिभिन्न प्रलोभनमा पारि बेचबिखन गर्ने र ब्यबसायिक रुपमा यौन शोषण गर्दछन् । मसाज पार्लरमा काम गर्ने बालिकाहरुलाई बिशेषगरि बालबेश्याबृत्तिमा लगाउने गरेको पाइन्छ ।
कस्ता बालबालिकाहरुलाई मनोरञ्जनको क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ ?
घरेलु हिंसामा शिकार भएका , सशसत्र द्धन्दको क्रममा बिस्थापित भएका , प्रकृतिक बिपदहरु जस्तःै बाढी पहिरो र भुकम्पबाट घरबार बिहिन भएका, गरिविको कारणले समस्यामा परेका , कलिलो उमेरमा नै धेरै कमाउने आकांक्षा राखेर शहर पस्ने , रोजगारीको खोजीमा, उपयुक्त शिक्षाको लागि र बिभिन्न खालको हिंसाबाट बच्न बिशोरीहरु विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरुबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइसाराई गर्ने क्रम बढ्दो रहेको पाइएको छ ।
के कारणले गर्दा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा बालबालिकालाई सहभागि गराउन सजिलो हुन्छ ?
यस क्षेत्रमा काम गर्नको लागि विशेष सीप तथा उमेर खुल्ने कागजातहरु नचाहिने कारणले कलिलो उमेरका बालिकाहरु मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश बालिकाहरुलाई सजिलो काम र धेरै पारिश्रमिक दिने भनेर ब्यबसायीहरुले प्रलोभनमा पार्दछन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश बालिकाहरु यौन शोषणबाट पीडित भएका हुनछन् ।
बालबालिका माथि हुने त्यस्ता अपराध भएमा के गर्ने ?
कुनैपनि व्यक्ति यस अपराधमा संलन्न भएको थाहा पाउने बितिक्कै उसको पूरै विवरण खुल्ने गरी नजिकको प्रहरी चौकीमा उजुर गर्नुपर्दछ । पीडकलाई सजाय दिलाउने मुख्य प्रमाण र आधार भनेको घटनाका साक्षी तथा पीडित स्वंयको बयान हुने हुँदा उनिहरूलाई आड, भरोसा दिदै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । घटनाका साक्षी तथा पीडितले बयान गर्दा प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा एकै किसिमको बयान दिनुपर्दछ ।
कसैको प्रलोभन वा दवाबमा परेर बयान फेर्ने काम गर्नुहुदैन । मुद्दाका सिलसिलामा आफ्नो वकिलसँग बराबर सम्पर्क गरी आवश्यक सल्लाह लिनुपर्दछ । पीडितको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर राज्य वा कुनै सस्थाद्वारा सञ्चालित पुर्नस्थापना केन्द्रमा निजको बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पीडितको मानवअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थासँग आवश्यक सहयोग र सल्लाह लिनुपर्दछ ।
बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरि उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु पर्दछ । सुरक्षित स्थानमा राख्ने सकेसम्म बालबालिका सेवा केन्द्र बालबालिकाको संरक्षण गर्ने स्थानमा राख्ने । बाल मनोबिमर्श गराउने । उजुरीकर्ता वा पीडितको नाम गोप्य रहने हुँदा जो सुकैले पनि उजुरी गर्न सक्नेबारे सवैलाई जानकारी दिने । जबरजस्ती करणी वा बाल यौन शोषणमा परेका बालबालिकाको घटना भएको देखिने कुनै कपडा वा अन्य कुनै वस्तु भए यथासक्य सुरक्षित राख्ने र राख्न लगाउने ।
जवरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराधमा ६ महिना भित्रमा उजुरी दिने तर स्वास्थ्य परिक्षण र भौतिक प्रमाण संकलन गर्नको लागि जति सक्दो छिटो उजुरी दिनु पर्दछ । मानव बेचबिखनको मुद्दामा भने जहिले उजुरी दिंदा पनि हुन्छ ।
बालबालिका माथि हुने त्यस्ता अपराध हुन नदिन के गर्ने ?
अपरिचित व्यक्तिको वा आफुले राम्रोसंग नचिनेको नबुझेको व्यक्तिको भनाईमा नलाग्ने । बिदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरुको आर्थिक प्रलोभनबाट बच्न बालबालिकाहरुलाई सचेतना प्रदान गर्ने । कोही कसैले कुनै किसिमको प्रलोभन दिई फकाउने कार्य गर्दैछ भन्ने लागेमा यस्ता प्रलोभनमा नलाग्ने ।
आफ्नो विश्वास पात्र अभिभावक बाहेक अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्दा वा उनीहरु सँग हेलमेल गर्दा बिचार पुरयाउने । कुनै व्यावसायिक काम गर्न वाध्यता छ भने पनि आफ्नो उमेरले सक्दो सुहाउँदो मात्र काम गर्ने र कतै शोषण हुन लागेको अवस्थामा आफु बच्ने बच्न नसके तत्काल उजुर गर्ने । यौनशोषण गर्ने उपर कानुनी कारवाही गर्न पीडितलाई सल्लाहा संरक्षण दिने । पीडकलाई कानुनी कारवाही गर्ने तर्फ पहल गर्ने ।
लेखक मानब अधिकार संरक्षण तथा मानव वेचबिखन बिरुद्धको संजाल, मकवानपुरका सचिव हुनुहुन्छ ।